छोराछोरिको लागि देखेको त्यो सपना , छोराछोरि संगै एकै छिनमै ख’रानि भयो , हे भगवान ! ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
दाङ को तुलसी पुर उप महा नगर भए पनि सम्साँ झै सु’नसान हुन्छ। हिउँदे वर्षा ले चिसि’एको तुलसी पुर का बासिन्दा बिही बार साँझ घर भित्र पसि सेका थिए।
रात छिप्पिँदै जाँदा लामो दूरीका बस र ढुवानीका सामान बोक्नेबाहेक अरू सवारी साधन सडकमा थिएनन्। प्राय: रात यसरी नै बित्ने तुलसीपुरमा बिहीबार मध्यरातिपछि भने हो-हल्ला भयो। तुलसीपुर-५ ‘ङ’ लाइनको घरमा सुतिरहेका ४० वर्षीय नगरदिन अली राति करिब १ बजेतिर ब्युझिएँ। धुँवाको गन्ध आइरहेको थाहा पाएपछि हेर्न बाहिर निस्किए।
मध्यरातमा आइलागेको आपतले तुलसीपुरवासी ब्युँझिए र घ,टनास्थलमा पुगे । आग’लागी भएको बजार क्षेत्रमा पानीका कुनै मुहान थिएनन्। नजिकै अरनीको मैदान नजिकै खानेपानीको कार्यालय छ। तुलसीपुरको प्यास पहाडी भूभागका मुलकोट, बाख्रे, छरछरेजस्ता मुहानले मेट्ने गर्छन। स्थायी पानीको स्रोत छैन। खहरे खोला थुप्रै भए पनि पुस-माघमा ती बगरमा बनिसक्छन्। पाँच मिटरमा ठडिएको घरमा पछाडि न कुनै निकास थियो न कुनै झ्याल।
साँघुरो घरभित्र जुत्ता-चप्पलको गोदाम राखिएको थियो। आगो त्यही गोदाममा लागेको थियो। छोराछोरी बचाउन गएका नगरदिन धुँवामा निसास्सिएर बाटो मै लडे। नगरदिन फर्किएनन्। छिमेकीहरू कराउन थाले। प्रहरीलाई खबर भयो, मध्यरातमा साइरन बजाउँदै दमकल गुड्न थाले। पुरा जानकारीको लागि!!
२०७८ चैत्र ३, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 197 Views